Kitapo Ice azo ampiasaina indray miaraka amin'ny tady azo ovaina
Amin'ny maha-fomba mahasalama sy azo antoka ampiasaina amin'ny fitsaboana ara-batana, ny fonosana gel mangatsiaka mafana dia matetika atolotry ny mpitsabo ara-batana, ny dokotera, ny mpanazatra fanatanjahan-tena. Ny fampiasana fonosana mangatsiaka mafana dia tsotra dia tsotra, ary raha te hanafaka ny tananao ianao dia ilaina ny tadiny, ny ekipanay dia manana ekipa manjaitra ary manjaitra mivantana ny fehy eo amin'ny fonosana ranomandry na manao ny tadiny tsirairay ao anaty fonosana, mora ho an'ny fampiasana farany.
Fonosana ranomandry azo alaina miaraka amin'ny tady velcro lava dia ahafahanao miaro ny fonosana ranomandry amin'ny faritra ilaina ary mijanona amin'ny toerany, malefaka hikasika ary mbola mijanona amin'ny toerany na dia mihetsika na manohy ny asan'ny ankohonana aza. Ny endrika tonga lafatra dia mamela ny fandrakofana lehibe amin'ny vodilanitra ambany manontolo sy endrika tsara amin'ny vatana, fitsaboana tsara ho an'ny lamosina marary, ratra, fanaintainana aorian'ny fandidiana, fivontosana, hozatra marary. Mihazona malefaka sy malefaka hatrany aorian'ny hatsiaka.
Toetoetra: famatsiana fitsaboana amin'ny laoniny
Karazana: fonosana mafana sy mangatsiaka